Cristiano Ronaldo Oo Afka Furtay Kana Hadlay Xaqiiqada Wararka Sheegaya In Uu Ka Tagayo Juventus – Wararka Ciyaaraha Maanta
April 20, 2019 kooxda Serie A, Wararka Maanta 0
Xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa ugu dambayn afka furtay kana hadlay wararka sheegaya in uu ka tagayo kooxda Juventus.
Xiddiga reer Portugal aya ku soo biiray kooxda Difaacanaysa horyaalka Serie A-da suuqii xagaaga isaga oo kaga soo biiray kooxda Real Madrid heshiis lama filaan noqday iyada oo loo badinayay in uu farqi weyn sameeyo kooxdana ku hogaamiyo ku guulaysiga champions League.
Laakiin kooxda Juventus ayaa si lama filaan ah uga hadhay champions league kadib markii ay guuldaro kala kulantay kooxda Ajax lugtii 2-aad ee 8 dhamaadka tartanka champions league.
Kadib guuldaradaas wargaysyada La Repubblica & Gazzetta dello Sport ayaa sheegay in uu Ronaldo ka xanaaqay guuldaradii waliba go,aansaday in uu isaga tago xagaaga 2020 hadii ayna kooxdu is badal iyo horuamr deg-deg ah samayn.
Laakiin Ronaldo ayaa ka hadlay wararkaas isaga oo wargayska Tuttosport u sheegay in uu niyad ku hayo in uu dhamaysto heshiiska 4-ta sano ah ee uu u saxiixay kooxda.
34 jirka oo arintaas ka hadlaya ayaa yidhi” Aniga ahaan kaliya waxa jirta Juventus”.
Xiddiga 5 jeer ku guulaystay Abaalmarinta xiddiga ugu fiican adduunka ayaa kooxda Juventus kula guulaysan kara manta horyaalka hadii ay guul ka gaadhaan kooxda Fiorentina kulan ka tirsan horyaalka Serie A-da.